Allgedo.com » Isfahan waaga waxa keenay waa Dastuurka ee ma ahan Dowladda Dhexe iyo maamul Gobaleedyada (Akhri sababta)
Isfahan waaga waxa keenay waa Dastuurka ee ma ahan Dowladda Dhexe iyo maamul Gobaleedyada (Akhri sababta)
Print here| By: allgedo.com: Thursday, October 12, 2017 // u Jawaab
Maadaama dadka Soomaaliyeed intooda badan dhaqan ahaan ay yihiin kuwo wax dhageysta ee aanan wax akhrin, waxaa muuqata hadda in ay kala garan la’yihiin khilaafka soo kala dhex galay Dowladda dhexe iyo Maamul Goboleedyada halka uu salka ku hayo.
Khilaafka isfahan waaga ee hadda taagan waa mid Dastuuri ah oo la xariira Qodobka 52-aad iyo kan 53-aad ee Dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Su’aalaha ay inta badan Soomaalidu isweydiiso ayaa waxaa ka mid ah:
Maxay mas’uuliyiinta maamul Goboleedyada u sheegtaan Title-ka Madaxweynimo oo ay u sheegan la’yihiin Guddoomiye Gobol ama “Governor?“
Ma sharcibaa in ay mas’uuliyiinta maamul Goboleedyada qabsadaan kulan u gaar ah oo ay arrimahooda uga wada tashanayaan sida kii mar dhow ka dhacay Kismaayo?
AKHRISTE: Haddii aan ka jawaabo labada su’aalood ee sare, sida ku cad Sharciga Nambarkiisu yahay 52, Qodobkiisa 1-aad, iyo Sharciga 53, qodobkiisa 1aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mas’uul maamul Gobol waa loogu yeeri karaa “MADAXWEYNE“.
Sidoo kale, sida ku cad isla Qodobada Dastuurka ee aan kor ku xusay, Nambaradooda 1-aad, “HAA“, mas’uuliyiinta maamul goboleedyada waa ka shiri karaan danahooda gaarka ah ayaga oo cuskanayaa Dastuurka Qaranka u yaala ee Ku meel gaarka ah.
Sidoo kale, ayada oo ay xaqiiqooyinka aan kor xusay oo dhan jiraan, ayaa waxaa kale oo dhamaadka Qodobka 1-aad ee Sharciga 53-aad si MALDAHAN oo aan qeexneyn u oranayaa “Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo, ….. xukuumadda Federaalku waa in ay Dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah???????
XASUUSIN: Qeybtan sare ee aan ku qoray FARTA CAS weeye halka la isku maandhaafsan yahay ee ay maamul Goboleedyada uga hor yimaadeen mowqifkii DHEX-DHEXAADKA ahaa ee ay Dowladda dhexe ka qaadatay muranka u dhaxeeya wadamada Carabta, ilaa Dastuurka dib loogu noqdo oo wixii qilaaf keeni kara oo dhan dib loo saxana, waxaa hubaal ah in uusan qilaaf iyo isbar-bar-yaac dhamaan doonin.
Haddaba, Si aad wax uga ogaato qodobadaas buuqa iyo isfahan waaga ka dhex dhaliyay Dowladda Dhexe iyo Maamul Goboleedyada, dadweynahuna ay ku wareereen, waa kuwaan hoose ee isha mari.
Qodobka 52aad. Iskaashiga Xukuumadaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka
(1) Xukuumadda Federaalka ah iyo Xukuumadah xubnaha ka ah waxaa waajib ku ah in madaxweyneyaasha Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Mas’uuliyiintooda sare yeeshaan kulammo joogto ama kaltan ay kaga wada xaajoodaan arrimaha degaammadooda wada saameeya oo ay ka mid yihiin:
(h) Xiriirinta iyo wada-xaajoodka hoggamiyeyaal-dhaqameedka, ilaalinta iyo horumarinta xeerdhaqameedka;
(2) Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalkayadu dhexdooda ama Xukuumadda Federaalka
waxay isla geli karaan heshiisyo iskaashi oo ay ku wada hawlgalaan, aanse lahayn awood sharci, kana horimanayn Dastuurka Federaalka iyo kan Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka.
(2) Marka ay wada-xaajoodyadu si gaar ahaan u saamaynayaan danaha khuseeyadawladda xubinta ka ah dawladda federaalka, xukuumadda Federaalku ergada wada-xaajoodka geleysa waxaa kaabaya wakiillo ka socda Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka.
(3) Xukuumadda Federaalka marka ay ka hawlgelayso wada- xaajoodyada, waa in ay isu aragtaa
xilgudashadeeduna ka muuqdaa in ay tahay ilaaliyaha danaha Dawladaha xubinta ka ah Dawladda
Hoos waxaan kusoo gudbinayaa Dastuurka wali Qabyada ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo sida laga warqabo ciddii lagala tashtay ee ansixiyay ay ahaayeen Oday Dhaqameedyo aanan aqoon u laheyn Dastuur dejin.
Guji xiriiriyahaan si aad wax badan uga ogaato Dastuurka weli qabyada ah oo dhameystiran
Qore: Aden Colujoog, qoraa madax-banaan